Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo xilka ka qaaday wasiir dowlaha madaxtooyada ee isku xirka gobolada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo xilka ka qaaday wasiir dowlaha madaxtooyada ee isku xirka gobolada
September 13, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Bashiir Cabdiraxmaan Gurxan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa xilkii ka qaaday Bashiir Cabdiraxmaan Gurxan oo ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada ee isku xirka gobolada, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka maanta oo Arbaco ah.
Ma cadda sababaha ka dambeeya xil ka qaadista, balse tilaabada ayaa timid maalin kadib markii Gurxan uu la hadlay warbaahinta uuna soo dhaweeyay go’aankii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay Qalbi-dhagax ugu gacan gelisay Itoobiya.
Garoowe-(Puntland Mirror) Culimada Puntland ayaa kasoo horjeestay bandhig faneed ay fanaaniin qurbaha kayimid ka dhigayaan magaalada Garoowe. Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Garoowe ayaa ku tilmaamay bandhig faneedkaas fidno. “Waxaan [...]